किशोरीहरुलाई पत्र - डा. अरुणा उप्रेती
तिमीहरूमध्ये जसले यो पत्र पढ्छौ, कतिपय सायद अंग्रेजी स्कुलमा पढिरहेका होऔला, कतिपय सहरका सरकारी स्कुलमा र कतिपय गाउँघरका स्कुलहरूमा वा ११-१२ कक्षामा पढिरहेका होऔला। कति बहिनीहरूले चाहिँ ८-९ कक्षा पढेर छोडेको होला। कतिपय कामको बोझले वा आमाबुबाले अब पढ्न पुग्यो भनेर स्कुल छोडाइदिएको होला। कतिपय किशोरीहरूचाहिँ स्कुलमा पढ्दा-पढ्दै कोही किशोरसँग प्रेम गरेर, घरबाट भागेर विवाह गरेका होला र जब केही समयपछि "बेकाममा विवाह गरेको, अहिले नर्कजस्तो भयो" भनेर भनेको होला। कतिपयलाई आमा बनेपछि श्रीमान वा प्रेमी भागेर बेपत्ता भएपछि धोका भयो भन्ने ठानेर आत्महत्याको प्रयास पनि गरेका होला। अर्थात् जिन्दगीमा कतिपय समस्याबाट आजित भएको होला।
कतिपय किशोरीहरूचाहिँ पढेर राम्रो काम गर्दै शिक्षक गर्छु भन्ने भावना बोकेर पढिरहेको होला। अहिलेको परिवेशमा किशोरीहरूलाई एकापट्टि एकदम धेरै मौका छ भने अर्कोतिर खुला परिवेश, रेडियो, टीभी, पत्रिका आदिबाट ज्ञान पनि प्राप्त गरेका होला। किशोरीहरूले "केटा साथी भएन भने त अरूको अगाडि लाज हुन्छ" भनेर सम्बन्ध पनि गरेको होला र शारीरिक संरचना कस्तो हुन्छ, कसरी गर्भवती भइन्छ, किन किशोर अवस्थामा यौनसम्पर्क राख्न हुँदैन भन्ने ज्ञानको अभावले गर्दा यौनसम्पर्क राखेर गर्भपतन गराएको पनि होला।
नेपालमा गर्भपतनको सुविधा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएर लामो संघर्ष गरेपछि आजभन्दा ८ वर्षअघि गर्भपतनको सुविधा विभिन्न ठाउँमा पुगेको छ। आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै अधिकार हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो किशोरीहरूले। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सानो उमेरमा राख्ने यौनसम्पर्क र प्रेमको नाममा जिम्मेवारीलाई वास्ता नगरेर यौनसम्पर्क राखेर गर्भ रहेर समस्याको सिर्जना गर्नुको अर्थ हो- तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई आदर गरेका छैनौ। तिमीहरूले प्रेमलाई केवल यौनसम्बन्धसँग मात्रै जोडेर हेर्छौ र "यौनसम्पर्क भएर के भो त, गर्भपतन त गराइहाल्छु नि" भन्ने विचार गर्छौ। यदि यस्तो हो भने तिमीहरूले ठूलो भूल गरिरहेका छौ। सबभन्दा पहिले त किशोरीहरूले यौनसम्पर्क गर्दा उनीहरूले आफ्नो शरीरमाथि के-के समस्या हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझेका हुँदैनन्। तिमीहरूमध्ये कमैलाई थाहा होला कि किशोर अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्दा पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ।
फेरि यदि गर्भ रह्यो भने गर्भपतनको सुविधा छ भने पनि तिमीहरूलाई कतिपय कठिनाइ पर्न सक्छ। सानो उमेरमा तिमीहरूको शरीर राम्रोसँग परिपक्व नहुने भएकोले यौनसम्बन्ध राखेपछि प्रजनन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ।
आजभन्दा २४ वर्षअघि जब म भर्खर डाक्टर पास गरेर प्रसूतिगृहमा काम गर्दै थिएँ। मैले १० वटाजति यस्ता घटनाहरू देखेँ। एउटा घटना त मेरो छिमेकमै भएको थियो। १७ वषर्ीया रेखाकी आमा विभिन्न ठाउँमा भाडा माझेर काम गरे पनि छोरीलाई स्कुल पठाउँथिन्। तर रेखा प्रेममा फँसिन् र मनकामनातिर जाँदा उनको शारीरिक सम्पर्क भएपछि गर्भवती भइन्। ४-५ महिनापछि उनकी आमाले रेखालाई त बान्ता भइरहन्छ, रूचि छैन, हेरिदिनोस्न भनिन्। मैले रेखालाई जाँच गरेँ, पेट ठूलो भएको त देखेँ, तर गर्भ रहेको शंका नै भएन र म सिकारु जाे थिएँ, अनि मैले प्रसूतिगृहमा स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई जाँचिदिन आग्रह गरेँ। जाँच गरेपछि डाक्टरले मलाई भन्नुभयो, "उनी त ७ महिना कि गर्भवती छिन्।" म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ। "तर उनको विवाह त भएको छैन", मैले भन्दा डाक्टरले भन्नुभयो "गर्भ रहन विवाह गर्नै पर्दैन। सोध्नु रेखालाई।"
उनको ७ महिनाको गर्भ एउटा प्राइभेट क्लिनिकमा लगेर पतन गराइयो। डाक्टरले भन्नुभएको थियो, "तपाईंको बहिनीजस्तो भन्ठानेर मात्र यो गरेकी हुँ। त्यसरी सानो उमेरमा पनि गर्भवती हुने हो र।" त्यो घटनापछि रेखाको जीवन नै बदलियो। उनी परिवारबाट अपहेलित भइन्, २४ वर्षपछि पनि अहिले उनी मानसिक रूपमा दुःखी छिन्।
तिमीहरूले कतिपयले भोगेको होला, गर्भपतन नहोस् भन्नका लागि हामी यौनसम्पर्क गरेपछि "इमर्जेन्सी औषधी" खाउँलानि त। तर यसरी जथाभावी औषधी प्रयोग गर्दा तिमीहरूको स्वास्थ्यमा कति नराम्रो असर पर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन ?
त्यसमाथि पनि जोसँग यौनसम्पर्क भएर गर्भ रहन्छ, उसले त्यो किशोरीलाई सहानुभूति राख्ला भनेर भन्न सकिँदैन। किशोर अवस्थाको प्रेम पानीको फोका हुन्छ। अनि यस्तो घटनापछि त किशोरीहरूलाई पढाइमा मन लगाउन पनि गाह्रो हुन्छ। किशारीहरू, तिमीहरूलाई पहिलेको तुलनामा धेरै सुविधा छ। शिक्षाको सुविधा छ, तर उपयोग गर्नुको सट्टामा तिमीहरूले दुरुपयोग गर्‍यौ भने त राम्रो भएन नि। नैतिकता र अनैतिकताको दृष्टिकोणले यौनसम्पर्कलाई हेर्ने कोसिस गर्नु
हुँदैन। तर तिमीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखेर शारीरिक र मानसिक स्वस्थ हुँदै किशोर अवस्थामा यौनसम्पर्क नगरेकै ठीक हुन्छ। प्रेम गर्नु नराम्रो होइन। तर यसले त जीवनलाई अघि बढाउन उत्साह दिनुपर्छ।
प्रेमको नाममा सानो उमेरमा यौनसम्पर्क गरेर जीवनलाई अँध्यारो बनाउने काम भयो भने त के अर्थ रह्यो र। शरीरलाई विभिन्न किसिमका यौनरोगबाट मुक्त राखेर जब तिमीहरू जीवनको जिम्मेवारी लिन सक्षम हुन्छौ, अनिमात्र सम्बन्ध गरेपछि जीवनको रंग नै अर्को हुन्छ।। कति किशोरीहरूले "अब त जे हुनु भइसक्यो, यस्तो पत्रको मतलब छैन" भन्लान्। तर स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले र छोरीहरूको आमा भएको नाताले मैले आफ्नी छोरीहरूलाई जे सिकाएको छु, त्यो नेपालका किशोरीहरूलाई बुझाउन सक्छु भन्ने आशय हो। अब के गर्ने वा प्रेमीलाई के भन्ने जिम्मा त तिमीहरूकै हो।